Ngokuba umsikazi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ngokuba umsikazi
Ungayisebenzisa kanjani i-boric acid ukuze uhlanza amehlo?
I-boric acid yinto esebenzayo ngendlela ye-powder engenambala e-crystalline. Kulungile kahle kunoma yikuphi uketshezi. Lesi sidakamizwa ngokuvamile sisetshenziselwa imithi yendabuko ukuze isetshenziswe kuma-pathologies ahlukene ezitho zombono. Lesi sidakamizwa sekuyisikhathi eside sisetshenziselwa ukucwiliswa kwemithi. Kodwa kuyadingeka ukusebenzisa i-boric acid ngokuqapha, ngoba odokotela baye baveza izinto ezingaphandle kwemiphumela yalesi sixazululo.
Iyini ikhambi le-boric acid alcohol? Isicelo kanye nemiyalelo yokulungiswa kwengxube engamaphesenti amathathu
Lesi sidakamizwa okwamanje sisetshenziselwa kokubili imithi kanye nemithi yendabuko, ngenxa yezinto zayo zokulwa nezidakamizwa. I-boric acid yisisombululo ku-ethanol (70%), ukuhlushwa okungahlukahluka phakathi kuka-0.6 kuya ku-4.5%. I-Odorless. Inzuzo eyinhloko yalo muthi yintengo ephansi nomphumela omkhulu kakhulu kusuka ekusetshenzisweni.
Qaphela impilo yakho: ukusetshenziswa kwe-boric acid compress ezindlebeni
Ukwelashwa kwezifo zezindlebe nge-boric acid ukucindezela sekuye kwenziwa njalo. Ukusetshenziswa kwe-compress ne-boric acid kungafaniswa ne-physiotherapy, kodwa i-compress ifinyeleleke kakhulu, futhi ingasetshenziswa ngaphandle kwemithi kadokotela. Okulandelayo, sizokutshela ukuthi yiziphi izinhlobo zokugqoka zezokwelapha, indlela yokuzisebenzisa ngokufanele, izinzuzo kanye nokungahambi kwenqubo.
Ikhambi elilula: Kungenzeka yini ukugcoba i-boric acid endlebeni? Ukuqhathaniswa nokuhamba kwesikhathi sokwelashwa
I-boric acid iyinhle kakhulu ye-antiseptic. Ngezinqubo zokuvuvukala endlebeni yokugxilonga, ungasebenzisa isisombululo sotshwala se-boric acid - amaphesenti amathathu. Akudingekile ukuba uzenzele imithi, kodwa qiniseka ukuthi uthintane nodokotela ukuze uthole ukuxilongwa okunembile. Izifo ze-Catarrhal ezindlebeni zihambisana nobunzima obunzima obunzima ukubhekana nazo.
Izincomo zokusetshenziswa kwe-boric acid ezivela emanzini
I-Boric (i-orthoboric) i-asidi isetshenziselwa ukwelashwa kwe-acne njenge-antiseptic. Kungenxa ye-acids ebuthakathaka, ayinambitha futhi iphunga, ayitholakali kalula emanzini. Siyazi ukuthi isiphuzo se-boric - isisombululo se-ethanol ka-70% ne-boric acid okuqukethwe kuka-0.5-3%. Ukwelashwa kwama-acne nama-acne, akusiwo kuphela isisombululo sokuphuza utshwala esetshenziswayo, kodwa futhi namafutha, kanye "nabakhulumi" abahlukene - ukumiswa okwesikhashana okungenalo kuphela i-boric acid, kodwa futhi nezinye izidakamizwa eziphatha isikhumba.
Amaqiniso abalulekile mayelana ne-boric acid ne-alcohol efana negama elifanayo - ingabe ikhambi elifanayo noma cha? Izici zohlelo lokusebenza
Abantu abaningi bakuthola kunzima ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezintathu ezinegama elifanayo - i-boric acid, i-boric alcohol, ne-salicylic acid. Ezokwelapha, umuthi onjenge-boric alcohol usetshenziswa kabanzi. Isixazululo ku-ethanol (70%) ye-boric acid, okuhlanganiswa kwayo okungaba ngu-0.5-5%.
Ingabe i-boric acid ephumelelayo ebuhlungu bezindlebe? Imiyalo yokusetshenziswa ekwelapheni i-otitis
Ngokuvamile, odokotela abanezifo zezindlebe bafuna utshwala obuthile noma u-boric acid endlebeni. Ezifo zezindlebe, i-boric acid ingumsizi obaluleke kakhulu enezinto ezinhle kakhulu ze-antiseptic. Le ndlela isetshenziselwa ukwelashwa isikhathi eside futhi inezici ezinhle. I-Otitis yindlela yokuvuvukala eyenzeka endlebeni.
Uthinta kanjani i-boric acid uma iwela ezindlebeni zakho ngesikhathi ukhulelwe?
Owesifazane esimweni esithakazelisayo angase abhekane nezinkinga zempilo. Njengoba akuyona into efiselekayo yokugula nokuthatha imithi ngesikhathi ukhulelwe, kubalulekile ukuzivikela ngangokunokwenzeka kuzo zonke izinhlobo zezifo. Lesi sihloko sizobhekana nokuphathwa kwe-otitis yabesifazane abakhulelwe abane-boric acid. Kubonakala sengathi amashumi eminyaka isisombululo sokuvuvukala kwama-auricles, okungenabungozi, ngoba sisetshenziselwa ukwelashwa kwe-otitis ezinganeni, kodwa akunjalo.
Izindlela ezintathu zokuphatha izingane nge-boric acid. Imiyalo yokusebenzisa i-antiseptic
I-boric acid yayisetshenziswa ngugogo bethu ekwelapheni izifo ezihlukahlukene. Emithi yesimanje, isetshenziswa yi-ophthalmologists, i-dermatologists kanye ne-otolaryngologists. Kuvame ukusetshenziselwa ukwelashwa kwezindlebe. Njengomthetho, i-boric acid iphathwa ngabantu abadala. Ngokuqondene nezingane, kunezimvo ezehlukene kulokhu.
Indlela yokwenza i-turunda nge-boric acid ukuphatha izindlebe, indlela yokusebenzisa nokuthi kungakanani ukuyigcina emgodini wezindlebe?
I-boric acid endlebeni isetshenziselwa cishe yonke imindeni, uma othile emndenini enenkinga ngezindlebe. Ukuze kwenziwe ukwelashwa kweziguli ezigulayo ebusuku, kubalulekile ukusebenzisa i-turndochki - lawa angama-cotton swabs ahambelana ne-boric alcohol. Lena indlela elula kakhulu futhi ephephile. Ukusetshenziswa kwe-turic acid boron acid kungenye yezindlela ezivame ukwelashwa kwezifo zezindlebe.
Izimfihlo ze-hawthorn ezomile ku-dryer kagesi kanye ne-microwave: khetha ukushisa okungcono
I-Hawthorn iyindlela enhle yokuqeda ukucindezeleka. Ukufaka amajikijolo ambalwa emgodini ngetiye oyikhonzile, uzozizwa uphumule ngokuphelele kanye nokuphuphuma kwamandla ngesikhathi esisodwa. Kumele futhi ukhumbule ukuthi i-hawthorn iyinhlangano ye-antiseptic yemvelo. Ukuthukuthela kwamathumbu ngumsizi wakho omkhulu.
Kungenzeka yini ukuthi ukhulule i-hawthorn ebusika, ekhaya ngaphandle kwamakhono akhethekile namacwecwe?
I-Hawthorn ithandwa kubantu abathanda kakhulu imithi yendabuko. I-Hawthorn ingumthombo weqiniso wamavithamini awusizo, ngakho-ke kudingekile ubuhle bakho nempilo yakho. I-Hawthorn iyi-berry enhle, ethanda futhi okuhle. Bobabili abadala nabantwana bayidla ngenjabulo. I-Hawthorn ingashintshwa njengezwe layo, futhi lizoveza izithelo, futhi zasendle.
Indlela yokomisa i-hawthorn ekhaya kuhhavini: isikhathi esingakanani nokuthi yikuphi ukushisa?
Ngokuphakama kwe-hawthorn ehlobo, i-shrub, iqala izimbali zayo ezisebenzayo, cishe zonke izingxenye zazo ezisetshenziselwa ukudla kuphela kodwa nezinhloso zokwelapha. Izimbali ezomile, amaqabunga kanye namajikijolo abanjwe itiye, asetshenziselwa ukulungiselela ama-compotes kanye nama-decoctions. Ngokuvamile lusetshenziselwa izinjongo zezimonyo, isibonelo, njenge-lotion yesikhumba.
Izindlela zokugcina igalikhi yasebusika ngempumelelo ekhaya
I-garlic yasebusika yisitshalo esingenasisekelo ngokugcina isitoreji, ikakhulukazi ekhaya. Yiziphi izindlela abendlukazi abakwazi ukuyigcina ngaphambi konyaka omusha? Ungayilungisa kanjani ama-garlic okugcina isitoreji eside, futhi yiziphi izimo ezidingekayo kwi-garlic yasebusika ukuze zihlale zihlanzekile futhi zingomile?
Ungayomisa kanjani i-garlic ekhaya emoyeni, kuhhavini nokushisa kagesi?
I-garlic iyimifino engakwazi ukubizwa ngokuthi umkhiqizo wendawo yonke oyingxenye yezidlo ezihlukahlukene. Ngokuvamile, i-garlic fresh isetshenziselwa ukupheka, kodwa kaningi ingatholakala kufomu elichotshoziwe nesomisiwe. I-garlic eyomile kulula ukuyigcina futhi itholakale unyaka wonke.
Kungenzeka yini ukugcina i-garlic egumbini elingaphansi nangaphansi kwebusika ebusika ngaphambi kokuvuna okusha?
Ukugcina igalikhi emiphongolweni ibhekwa njengendlela engcono kakhulu. Uma i-cellar ikulungiselelwe kahle, akukho okuyovimbela ugarliki ukuthi ulale lapho kuze kube sehlobo, kanti ngezinye izikhathi kuze kufike isivuno esisha. Izinkinga zingenzeka ngenxa yokungahambisani nanoma yiziphi izimo zokugcina ezibalulekile. Kodwa-ke, umgadi wensimu unayo yonke indlela nezindlela ongayenza ngazo izimo ezinhle zokugcina ugarlic.
Ungazigcina kanjani amapheya amasha ebusika ekhaya?
I-autumn yayivuthiwe futhi yanikeza isivuno esicebile samapheya? Amalungiselelo adingekayo ngesimo sezithelo ezomisiwe kusuka kwamapheya kanye nezithelo ezomisiwe sezivele zenziwe, kodwa kukhona izithelo eziningi namanje? Kungenzeka yini ukugcina izithelo ezintsha ekhaya? Yini nokuthi ungagcina kanjani amapheya? Kuze kube nini? Futhi kuyoba yini into ewusizo kubo?
Khetha okusemandleni, ukuthi ungagcina kanjani i-garlic ebusika ekhaya: esiqandisini noma emabhange?
I-garlic yengeza kakhulu izitsha zakho eziyizintandokazi. Inikeza ukunambitheka okubabayo futhi kuchithe ukudla. It isetshenziswa ekuphekeni kanye nemithi yendabuko, kudingekile kuzo zonke ikhishi futhi kuhle ukuthi garlic ine izinga lokugcina okuhle. Igcinwe isikhathi eside futhi ayihlohli, kodwa kuphela ngaphansi kwazo zonke izimo. Kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela yokugcina igalikhi ekhaya endlini?
Ukulondoloza izithelo ebusika: kanjani ukoma amapheya elangeni ngqo?
Izithelo ezomile kuyindlela enhle yokugcina izithako zayo kanye nezakhiwo eziwusizo isikhathi eside, futhi lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kithi - akunzima ukukhathazeka ngezithelo zasehlobo ebusika obude nobandayo. Ungenza ama-compotes amahle, ama-decoctions kanye nama-infusions ezithelo ezomisiwe, uwafake izitsha ezihlukahlukene, isibonelo, ama-pie futhi-ke, ukusebenzisa ngaphandle kwakho konke futhi njengawo.
Amavithamini unyaka wonke: kanjani ukugcina amapheya ebusika emiphongolweni?
I-autumn yisikhathi sokuvuna. Zonke izakhamuzi zasehlobo zinesithakazelo sendlela yokulondoloza imiphumela yentwasahlobo yabo kanye nehlobo zisebenza isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Kunzima kakhudlwana ukugcina izithelo ezinomsoco namanzi ezinomsoco kodwa ezinamahloni kakhulu njengamapheya. Nakuba amapheya agcinwa kakhulu kunama-apula, kodwa, kunjalo, kungenzeka ukuthi uwagcine ukuze usebusika.